Taliyihii hore ee ciidamada birmadka Puntland ee gobolka Mudug oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliyihii hore ee ciidamada birmadka Puntland ee gobolka Mudug oo lagu dilay magaalada Gaalkacyo
July 28, 2018 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Kornayl Cabdirashiid Xasan Xaashi, oo loo yaqaan “Gabi Gabi”. [Sawirka]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Taliyihii hore ee ciidamada birmadka Puntland ee gobolka Mudug, ayaa kooxo aan heybtooda la garanayn ku dileen magaalada Gaalkacyo fiidnimadii Jimcada, sida ay sheegeen ilo-wareedyo dhanka ammaank ah.
Kornayl Cabdirashiid Xasan Xaashi, oo loo yaqaan “Gabi Gabi”, ayaa lagu toogtay banaanka masaajid kuyaala Gaalkacyo, halkaas oo u ku tukaday salaada cisho.
Nimankii dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta kadib weerarka, sida ay ilo-wareedku sheegeen.
Ma jirto koox sheegatay masuuliyada dilkaas balse saraakiisha ammaanka ayaa sheegaysa in maleeshiyada looga shaki qabo in ay weerarkaas qaadeen.
Bilihii dhawaa ee lasoo dhaafay, masuuliyiin sare oo katirsan Puntland ayaa lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Xildhibaan Cabdixakiim Macalin Daahir oo katirsanaa baarlamaanka Puntland ayaa niman baastoolado ku hubeysan ku dileen Gaalkacyo dabayaaqadii bishii May.
May 12, 2018 Ku dhawaad 15,000 arday oo u fariistay imtixaanka fasalka 8-aad iyo fasalka 4-aad gudaha Puntland